जसलाई फेसबुकबाट नजिकिएका ‘साथी’ले जि’उँ’दै म’ट्टिते’ल छ’र्के’र आ’गो ल’गाइदिए – Dainik Samchar
April 2, 2021 225
काठमाडौं। दैनिक ज्या’ला’दारी काम गरेर पाँच जनाको परिवार पाल्दै आएका चक्रबहादुर कार्की सधैंझै काम खोज्दै दौडिरहेका थिए। मोबाइलमा नयाँ नम्बरबाट फोन आयो। उनले उठाए। उठाउने बित्तिकै आवाज आयो, ‘तपाइँको छोरीको शxरीरमा आxगो लागेको छ। एकदमै सिxरियस अवस्थामा छ। तपाई तुरुन्तै अ’स्पताल आउनु पर्यो।’
फोन राम्रोसँग सुनिएन उनले विस्तारमा बुझेनन् । यत्ति बुझे उनकी छोरी सं’कटमा छिन् र यत्ति बुझ्नु उनलाई साँखुको सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालतर्फ दौडिनको लागि पर्याप्त थियो । अस्पतालमा उनकी छोरी चि’न्न नसकिने अवस्थामा थिइन् । जले’र अनुहार क्ष’त वि’क्षत भएको थियो । छोरीको विभत्स अवस्था देखेर निराश भए। होस हवास उड्यो। डाक्टरले भने ‘ढिलो किन गर्नुभयो ? तुरुन्त आइसियूमा राख्नु पर्छ। भेन्टिलेटर लिनुपर्छ ।’
महिला हिं’साका घ’टना समाचारमा थाहा पाउने गरेका कार्कीलाई आफ्नै छोरीमाथि ब’ज्रपा’त पर्दा नि’राशाले छोपेको छ । ‘छोरीलाई यस्तो वि’भत्स अ’वस्थामा पुर्याउने अप’राधीलाई हदैसम्मको का’रवाही हुनुपर्छ। मेरी छोरीलाई भाग्य’ले बचायो। उनका साथीहरु तु’रुन्तै आएर अस्पताल नपुर्याएको भए जेसुकै हुन सक्थ्यो’ किर्तिपुर अस्पतालमा छोरीको उप’चार गराइरहेका कार्की भन्छन् ।
सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालबाट किर्तिपुर अस्पताल रिफर गरिएकी सोलुखुम्बु दुधकोशी गाउँपालिकाकी पूजा कार्की अहिले बोल्न नसक्ने अवस्थामा छिन् । ५ दिनसम्म आइसीयूमा राखेर उ’पचार गरेपछि उनलाई अहिले आइसीयूबाट बाहिर निकालिएको छ । उनी अस्पताल भर्ना भएको १२ दिन बितिसकेको छ। १९ वर्षकी पूजा कक्षा १२ की विद्यार्थी हुन् । उनी परिवारसहित जोरपाटीमा बस्दै आएकी छिन् ।
चैत ८ गते आइतबारको दिन पूजा कोठामै थिइन् । लञ्जमा पाहुनालाई स्वागत गर्ने काम गर्ने पूजाको काम बेलुकीको समयमा हुन्छ । रातमा काम गरेकी उनी बिहान सु’तिरहेकी थिइन् । बिहानको ९ बजेतिर पाजी भनिने सुरज श्रेष्ठ कोठामा आए । थाकेकी पूजाले आफू थकित भएको बताइन् । त्यसपछि सुरजले उनलाई कु’टपि’ट गर्न थाले ।
सुरज र पूजाको चिनजान सामाजिक संजालबाट भएको थियो । केही समयअघि पुजालाई फेसबुकमा रिक्वेस्ट आयो उनले एसेप्ट गरिन् । चिनजान पनि भयो । अहिले भने पूजा आफूले मान्छे चिन्न गल्ती गरेको महसुस गर्छिन् । फेसबुकमा चिनजानपछि उनहिरुबीच कुराकानी हुन थाल्यो । सुरुमा सुरजको व्यवहार राम्रै थियो । तर, पछि सुरज उनीप्रति अलि बढी नै आ’शक्त हुन थाले । कोठामा, कलेजमा, काम गर्ने ठाउँसम्म समेत पि’छा गर्न थाले । सुरज ला’गू’पदा’र्थका दु’र्व्यसनी पनि हुन् । उनी यसअघि सुधार के’न्द्रमा समेत बसेर फर्किएका हुन् ।
सुरजले अनावश्यक त’नाब दिन थालेपछि पूजाले उनीबाट टाढिन खोजिन् । तर, सुरज टाढिन चाहेनन् । बरु उनी थप हिं’स्रक हुन थाले । पहिले पनि सुरजले पूजालाई मारि’दिएर आफू पनि म’र्ने ध’म्कीसमेत दिइसकेका थिए । पूजालाई घरपरिवारको आ’र्थिक स्थितिको चिन्ता थियो त्यसैले उनले पनि काम गर्न थालेकी थिइन् । सुरजले भने उनलाई कहीँ पनि सुख दिँदैनथे । सुरजको एकोहोरो व्यवहारले दिक्क भएकी पूजा टाढिँदै जान थालेपछि उनहिरुबीच वि’वाद सुरु भएको थियो ।
यही वि’वादका बीच पूजाको कोठामा आएका सुरजले उनलाई ध’म्की दिने, ब्ल्या’कमेल गर्ने गर्न थाले । पूजाले प्रतिवाद गरिन्, सुरज झन् आ’क्रोशित भए । यत्तिकैमा सुरजले हातमा च’क्कु लिए । आत्तिएकी पूजा घरबाट बाहिर निस्किन खोजिन् । दुवैबीच चक्कु खोसाखोस भयो । ‘उसले ज’बर्ज’स्ती गर्दा मेरो निधारमा चक्कु लाग्यो। अत्या’धिक रगत बग्न थाले पछि म क’राउन थालेँ। त्यहीबेला उसले नजिकै रहेको मट्टि’तेल मेरो शरीरमा छ’र्कियो र आ’गो ल’गायो’ पूजाले घ’टना सम्झिइन् ।(dc नेपाल बाट)
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, चैत्र २० गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextविवाह अगाडी नै गर्भवती भएको भन्दै दियाको आलोचना !
जनता टाइम्सका संपादक शान्तिराम कार्कीको निधन (594)